Electric Water Bamka, Dabaasha Pool saar, DC Pool saar - Jade
6 Sababaha Maxaad waa in aad doorato Jade
Focus on daahiriyey aad pool iyo noloshaada
Tan iyo 1986, Shiinaha keentay saaraha motor. Jade hormariyey dabaasha bamka pool ay technology motor sare oo uu ku guulaystay sumcad wanaagsan dunida oo dhan ee la soo dhaafay 5 sano.
ETL, CETL, CE, ROHS, caddeyn CEC iwm Dhammaan qaybaha ay qaataan qalabka aqoon. 100% jeeg tayada iyo baaritaan raagaya xidhaan wax soo saarka kasta oo ka hor shixnad.
wax soo saarka baaxad weyn iyo shaqaalaha si fiican u tababaran yareeyo kharashka aad bay u, wax soo saarka sahayda Jade qiimo ugu tartan si aad u noqdaan iibiyaha ugu tartan ee gobolka.
Time Lead Gaaban
Dhowr mashiinada automatic saxda weyn kaa caawin in ay degdegin amar in waqti gaaban. Waxaan leenahay kartaa amar deg deg ah oo diyaar ku ah kaliya 1 toddobaad.
waxyaabaha xariif hogaanka design in si fudud loo xirxiro iyo dayactirka, kaa caawin si loo yareeyo celinta sababa adag ka hawlgala.
iibka Top la xirfadeed dhigi marnaba dareensan tahay in aad u adag tahay in la warshad xiriiraan, dhammaan shaqaalaha Jade istaagi doonaa aad by, jawaab aad weydiinta iyo xalinta dhibaatada, iyadoo aan loo eegayn pre-iibinta ama iibka ka dib.
20 "(500mm) Filter Sand iyo System saar
Automatic Pool Cover saar
8 Taxanaha Super Flow saar
Saar Speed ​​variable
Jade ALAABADA macradka
Voices of Macaamiisha Our
Waxaan ka fiirsaday Jade sida mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha our kale ee la soo dhaafay dhowr sano oo meel kaliya ka amar maxkamad yar. Waxa ay u muuqataa waxyaabaha ay ku fiican yihiin ku filan si ay u qanciso macaamiisheena, waxaan arki yar celinta ka macaamiisheena. Qaar badan oo ka mid ah ...
Howard Clancy, qaybiyaha A ee Australia
Jade baahida our dhammaataan. Waxay awoodaan inay noo soo gudbiyaan midabyo kartoo iyo muuqaalka waayo, bambooyin iyo filtarrada inkastoo aan ma iibsan badan si kasta oo ay yihiin. Waxaana dareemayaa in ay qiimeeyaan shirkadda this cusub.
William King, dhisaha pool A & mainta ...
waa weyn si ay ula shaqeeyaan Jade, waxaan si gaar ah inaan soo jiitay by hawshooda u fiican-iib aheyn ka dib! Waxaan dhibban tallaabadaas matoorrada ay la dhinac asalka qoyan macaamiisheena 'oo codsaday kaalmo. Little ma waxaan u malaynayaa in ...
Liberato Guzman, qaybiyaha A ee USA